Uxolo u-Microsoft, ndicinga ukuba ndinuka impuku! | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 18, 2006 NgoLwesihlanu, Oktobha 26, 2018 Douglas Karr
Xa ndandiqhuba iposi ndisebenza ngqo kwiphephandaba, isicwangciso sethu sasilula kwaye sisebenza ngokukuko. Singabomeleza abathengisi bethu ekusebenziseni inkqubo yethu yemeyile ngokuthe ngqo ngokubabonelela ngezaphulelo kuwo onke amaxabiso entengiso. Sasinenkqubo esemgangathweni ethe ngqo yeposi, kodwa amaxabiso ethu ayephezulu kakhulu xa kuthelekiswa nalo naluphi na ukhuphiswano. Isicwangciso-qhinga sibe yimpumelelo enkulu kwaye sihlala sithatha ishishini kude nokhuphiswano lwethu… nangona abathengisi bahlawule ngaphezulu.
Ngaphakathi, esi yayisisicwangciso-qhinga sokujonga kwakhona okwahlukileyo kukhuphiswano lwethu. Into eyahluleyo kuthi kukuba besele sinobudlelwane naba bathengisi, kufuneka sisebenzise nje. Ndiqinisekile ukuba ngaphandle bejonge ngaphakathi, abantu babecinga ukuba sibi. Kodwa yayili shishini. Khange ndizive ndikhathazekile ngayo kuba ndicinga ukuba izibonelelo zenkqubo yethu zingaphezulu kakhulu kweenkqubo ezikhuphisana nathi. Senze uhlalutyo lwasimahla, sigcina ugcino lwedatha emnandi, salawula uluhlu lwabo lokuNgathumeli imeyile, njl.njl.
I-Reaction beta blog inolwazi malunga neMicrosoft Internet Explorer 7 kunye neziphumo zayo zovavanyo lokuthobela kunye nemigangatho yeCSS (Cascading Style Sheet). Iziphumo zizoyikeka. IMicrosoft inokuba ibuyela umva ngokubhekisele kwimigangatho ye-intanethi, hayi ngaphambili. Le isenokungabi yinto enkulu kubasebenzisi, kodwa yimeko embi kwiinkampani zophuhliso. Ukuba umsantsa uya usiba banzi ngendlela iibrawuza eziyiphatha ngayo imigangatho, iindleko zoko zityhalelwa kwiinkampani ezisasaza usetyenziso lwewebhu. Kuya kufuneka baxhase amaqonga azimeleyo anekhowudi entsonkothileyo, kwaye nangoluhlu lweempawu ezisekwe kwinkqubo nganye. Ugh. Imijikelezo emide yophuhliso, iibugs ezingakumbi, izikhalazo ezingakumbi, njl.
Ke… ukuba ubunguMicrosoft kwaye kwenzeke into embi, ibiya kuba liphi iqhinga lakho ukuba ufuna ukukhupha imveliso engaphantsi komgangatho? Mhlawumbi ungayihambisa nangayiphi na indlela. Ungathini xa abantu bengayifuni? Kulungile… ngoku ukuba wonke umntu usebenzisa uHlaziyo oluZenzekelayo, khetha ngokulula uhlaziyo kwi-Internet Explorer 7 njenge luleke hlaziya. Isonjululwe ingxaki… ukwamkelwa okungafunekiyo kobukho bemveliso ekumgangatho ophantsi ngokunyanzelwa.
Into embi kukuba ndingumntu othanda iMicrosoft, andinguye IMicrosoft ayibi mfo. Kodwa ndicinga ukuba ndinuka impuku. Imbonakalo yam yeMicrosoft inokutshintsha kungekudala.
Khuphela iFirefox, bantu. Oku kuya kuba ngumlo.
tags: umqhubi we-intanethiukwamkelwa kwabahlali ngobuninzimicrosoft